Iresiphi yetiye le-Chai, amakhalori aphansi | Ukupheka Kwekhishi
Itiye le-Chai noma le-masala chai selidume kakhulu eSpain nakwamanye amazwe ngenxa yama-Starbucks adumile, yize le tiye livela eNdiya futhi kuyinto abebeyilungiselela isikhathi eside. ENdiya singathola abathengisi ababizwa ngeChai Wallahs lapho singathenga khona itiye lethu elimnandi elinongwe nganoma yisiphi isikhathi, yize kujwayelekile ukuliphuza ekuseni, njengoba nje siphuza ikhofi.
Empeleni iresiphi yehluka kakhulu, umndeni ngamunye uyayithinta, futhi into enhle kakhulu ukuthi singayivumelanisa nokuthanda kwethu nezidingo zethu. Iresiphi engikuphathela yona bekuyiyona ebengiyithanda kakhulu, kepha ekugcineni ngikushiya nokwehluka okuvame ukwenziwa ukuze ukwazi ukukuthatha ngezinye izindlela uze uthole okuthandayo.
Isipuni setiye elimnyama
Ama-pods ama-3 we-cardamom
Izingcezu ezi-2 zikajinja
Ama-peppercorn ama-2 amnyama
Sifaka zonke izinongo epanini elinamanzi bese siletha ngamathumba. Mayiyeke imizuzu embalwa bese icisha umlilo, mayiphumule imizuzu emihlanu. Sisebenza nenani likashukela esilithanda kakhulu futhi yilokho kuphela.
Ungangeza ubisi, ngalokho sizoba ne-Chai latte. Kunconywa ukuthi ubisi lufinywe noma lube nesoya.
Kukhona abangafaki upelepele noma i-cardamom kuyo.
Elithengiswa kwa-Starbucks linama-calories azungeze i-120, lingahluka ngokuya ngokuthi silithatha nobisi noma ngaphandle kwalo.
Isikhathi sokulungiselela Imizuzu ye-0
Ama-Kilocalories ngokusebenza ngakunye 40
Iziphuzo, Ukupheka okulula
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Ukupheka Okukhethekile » Ukupheka okulula » Iresiphi yetiye le-Chai, amakhalori aphansi